PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-01-01 - Abadlaleli ukugcina icala
Abadlaleli ukugcina icala
KUDALA iLamontville Golden Arrows yayingelinye lamaqembu ayehlonishwa ngendlela ayelithinta ngayo ensimini nokwakwenza amaqembu ayezodlala nayo angayizeli ngobuso.
Kuze kube manje Abafana Bes’thende basahlabane ngesicoco esisodwa kwi-Absa Premiership. Lesi sicoco yiMTN 8 abayithole ngo-2009 besaqeqeshwa nguManqoba Mngqithi.
Exoxisana naleli phephandaba umgadli we- Arrows onesivinini, uLerato Lamola, uthembise ukuthi bengabadlali bazokwenza konke okusemandleni ukuthi bayacijisisa imicibisholo.
“Ngale sizini asidlaleli ukugcina icala nesibalo samaqembu ePremiership. Siphokophelele ekutheni kube khona esikutholayo,” kusho uLamola.
ULamola ufike kwi-Arrows ngokuqala kwesizini ephuma kwiBloemfontein Celtic ugcizelele wathi bazoqhubeka nokudlala ngokuzikhandla ukuze babe semshungwini ozokuba sembangweni wesicoco seligi.
Leli qembu liye ekhefini likaKhisimusi lihlezi endaweni yesithupha kwilog ye-Absa Premiership ngamaphuzu awu-20, emidlalweni ewu-15.
Abafana Bes’thende bahlukaniswe amaphuzu amahlanu neSuperSport United eqhwakele phezulu ngamaphuzu ngawu-25.
Ukuzimisela kwabadlali be-Arrows ngokuzinza eqoqweni layisishiyagalombili kwilog kuzofanele bakukhombise ngomdlalo wokuzibula unyaka lapho bezogadulisana kuwona neSuperSport United.
Lo mdlalo uzodlalelwa eLucas Moripe Stadiuim, eTshwane ngoFebhuwari 8 ngo 7.30 ebusuku.
Ukuvula naMatsatsantsa aPitori akuwona umdlalo ithimba labaqeqeshi elingawuthatha kancane njengoba uStuart Baxter owacijayo aziwa ukuthi umandla kakhulu ngokuzumisa lapho iqembu adlala nalo kade lihlasela, bese elibamba linganakile. Elinye iqhinga ahlabana ngalo ngama-free kick nama-corner kick.
Ephawula ngomdlalo neSuperSport oyiphini lomqeqeshi uMandla Ncikazi uthe akuyona inkinga ukubhekana noBaxter ngoba iqhinga lakhe liyaziwa futhi uma ukwazile ukulihlelela kahle usuke ungeke ubhekane nenkinga. “Ukuvula UKUNGASINGATHWA ngendlela kwempicabadala yombango wamandla okulawula isifunda iSafa eThekwini nokushaywa indiva kwesinqumo senkantolo esasithi ukhetho lunqaqhubeki, kungase kuholele ekutheni kuhlakazwe amakomiti amabili abalulekile ale nhlangano.
Amakomiti athintekayo ngeleDispute Resolution Committee (DRC) usihlalo walo okunguBrian Xaba. Elinye yiLegal and Constitutional, eliholwa ngummeli wasemaJajini uNorman Arendse.
Ngokuthola kweSolezwe ngeSonto, ngomthombo ongaphakathi kule nhlangano, isigungu samalungu ayisithupha esaziwa nge-Emergency Management Committee (EMCO) awaneme ngokuhlambalazeka kwenhlangano.
“Bakhala ngokuthi ngesikhathi uBrian Xaba noVelaphi Kubheka beqhubeka nokhetho, ekubeni base bazi kahle ukuthi kunesivimbelo senkantolo, esabe sithi alungaqhubeki, lokho kwashiya isichashaza elibi lokuthi iSafa iyinhlangano engahambisani nezinqumo zezinkantolo zezwe,” kusho umthombo.
Uqhuba uthi lolu daba lwalungamele luyiswe kwi-Arbitration ngoba inkantolo yayikade ithe aluxazululwe ngokulandela umyalelo ka-article 58 okumthethosisekelo weSafa.
“Ngesikhathi bethi leli komiti lakhiwe ngabantu besigungu sikazwelonke ngakho abalethembi, uXaba kwakumele udaba alubuyisele enkantolo ngoba kwakuwuhlangothi lwaseHoy Park olwalucele inkantolo ukuthi iluxazulule ngokulandela u-article 58 womthethosisekelo..
“Futhi babazi kahle ukuthi amakomiti eSafa ozihlalo bawo ngabantu abangamalungu esigungu sikazwelonke. Ukwenza isincomo sokuthi aludluliselwe kwi-Arbitrator ngokusebenzisa u-article 71, kwabe sekuwukudelela inkantolo.”
Mayelana nokudelela inkantolo kwakamuva nje kokuqhubeka nokhetho kuze kube kubuyekezwa isinqumo sika-Epstein (umahluleli) kukhonjwa ngenjumbane u-Arendse.
“Kuthiwa kunobufakazi obuqanda ikhanda obukhomba ukuthi kwaba nguArendse owathi akuqhutshelwe nokhetho phezu kwesinqumo.
“Yikhona konke lokhu okuphoqa iSafa ukuthi abone kungcono ahlakazwe la makomiti kufakwe abantu abasha abangeke badicilele phansi isithunzi senhlangano,” kusho umthombo.
Okhulumela iSafa, uDominic Chimhavi, akatholakalanga ukuthi aphawule, ucingo lwakhe belungaphendulwa.
Isolezwe ngeSonto lingakudalula ukuthi uXaba, uKubheka no-Arendse basazobizelwa phambi kwe-EMCO bazochaza ukuthi kwenzekani ngesikhathi kushaywa indiva isinqumo senkantolo. Bekufanele bavele kwi-EMCO kodwa babika ukuxineka bobathathu. Abazaziyo ezeSafa bathi bangase bavele phambi kweEMCO ngaphambi kokuthi kuhlaziywe isinqumo sika-Epstein yinkantolo yamaJaji, eThekwini ngoJanuwari 24, 2017.